Tag: irce | Martech Zone
Mgbe m nọ na IRCE, m bịara ịnọdụ ala na Intuit's SVP of Payments and Commerce Solutions, Eric Dunn. Ọ bụ ihe nlele anya n'ime uto Intuit na ahịa azụmaahịa na ecommerce. N'ezie, ọtụtụ ndị anaghị aghọta ma ego karịa Intuit karịa PayPal mgbe ọ bịara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị (ọ bụrụ na ị gụnyere ọrụ ha na-akwụ ụgwọ). Intuit na-aga n'ihu na-agbasi mbọ ike ịbụ ihe njedebe njedebe maka azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla ebe
Na IRCE, Kristine Szarkowitz kpọrọ m ka m soro Frank Poore na Eric Best nọdụ ala iji kpaa CommerceHub na ọtụtụ onyinye ya. CommerceHub nwere ụlọ ndozi mara mma nke nwere ala nke abụọ. Nke a bụ ihe ngosi nke ala ihe ngosi site na ụlọ ntu ahụ: CommerceHub na-ebuli ngwaahịa SKU dị iche iche 50 nde pụrụ iche maka nnabata data, nchịkọta channel na arụmọrụ ahịa. Na Jenụwarị, CommerceHub nwetara Mercent, ụlọ ọrụ na-ere ahịa mkpọsa dị elu nke na-eme ka mgbasa ozi ahịa na-aga site na ọwa